Sintomy Ilyushin Il-76 MD FS2004
Ho an'ny dikan-teny feno kokoa noho ny FSX kitiho eto
Amin'izao fotoana izao, tsy misy antontan-taratasy afa-tsy ny iray amin'ny teny Rosiana izay Afaka maka eto Manual335-Il76.zip (25.8 MB).
Ny Ilyushin Il-76 (OTAN nitatitra name: Candid) dia multi-tanjona efatra-maotera turbofan stratejika airlifter namorona ny Firaisana Sovietika ny Ilyushin famolavolana biraon'ny. Ny voalohany dia Nikasa ho toy ny ara-barotra freighter in 1967, toy ny fanoloana ny Antonov An-12. Natao mba hanolotra fitaovana mavesatra ny lavitra, zara raha nanompo faritra. Miaramila dikan 'ny Il-76 no be mpampiasa tany Eoropa, Azia sy Afrika, anisan'izany ny fampiasana toy ny avy eny ambony sambo na ny didy refueling foibe.
Ny Il-76 dia nahita be dia be asa fanompoana ho toy ny ara-barotra freighter ho fiakarana-namonjy entana, indrindra fa ho an'ny outsized na mavesatra entana raha tsy izany tsy afaka ny ho entina. Fantatra koa fa nampiasaina ho toy ny vonjy taitra ho an'ny sivily valin'ny fitaterana evacuations ary koa ny maha-olombelona sy ny fanampiana tra-boina manerana izao tontolo izao. Noho ny fahaizany miasa amin'ny lalan runways, izany no ilaina eo amin'ny faritra nobeazin'ny. Modely manokana ihany koa ny vokatra ho avy eny ambony famonoana afo sy aotra-G fiofanana. (Wikipedia)
Downloads 8 234